सात साल यताका सबै राजनीतिक मुद्धाहरु एक पटककालागि खारेज गरिनु पर्छः नेता प्याकुरेल
इसीमाना सम्वाददाता बीरगंज ८ बैशाख २०७८ 145 पटक पढिएको
नेकपा एमालेका नेता सुमन प्याकुरेलले बिगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न भएकै कारण राजनीतिक ब्यक्तिलाई लगाइएका बिभिन्न खालको मुद्धा खारेज हुनु पर्ने बताउनु भएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपाल पर्सा शाखाले ०७७ चैत २५ मा भएको निर्वाचनमा बिजयी पदाधिकारीहरुलाई सम्मान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्तब्य ब्यक्त गर्दै पार्टीको प्रदेश २ का सचिव समेत रहनु भएको नेता प्याकुरेलले २००७ साल देखी अहिले सम्मका सबै राजनीतिक मुद्धा एक पटककालागि खारेज गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो “एक पटककालागि सबै मुद्धाहरु खारेज हुनु पर्छ म सरकार संग माँग गर्दछु ।
उहाँले पत्रकार समाजका अभिन्न अंङ भएकोले सत्य तथ्य समाचार लेखेर जनतालाई सुचना दिन आग्रह गर्नु भएको थियो।उहाँले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन घटना बारे आफुहरु चिन्तित भएको बताए। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका राम्रा कामका बारेमा पनि कलम चलाउन पत्रकारहरलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सम्मान कार्यक्रममा नेकपा एमाले पर्साका अध्यक्ष प्रभू हजरा,संविधान सभा सदस्य राजकुमार गुप्ता ,नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव दिपेन्द्र चौहान,केन्द्रीय सदस्य के.सी. लामिछाने,पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारी,,प्रेस चौतारी नेपालका सल्लाहकार महेश दास,नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष राम नारायण कुर्मी ,वानका महासचिव आर.सी. यादव लगायतले शुभकामना दिनुभएको थियो। प्रेस चौतारी पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जाराको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई बिजय भन्डारीले सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा स्वागत पत्रकार महेशचन्द्र गौतम र कार्यक्रमको उद्धेश्य माथि युवराज खड्काले प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्र प्रदेश र जिल्ला निर्वाचित सबै पदाधिकारी सदस्यहरुलाई माला र गम्छा ओडाएर सम्मान गरिएको थियो ।